GemGenèveသည်ဒီဇိုင်နာများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာအသစ်များကိုကြိုဆိုသည် - HIGH JEWELLERY DREAM
GemGenèveသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ - ရတနာအသစ်များကိုကြိုဆိုသည်
GemGenèveရှိဆုရရတနာသမိုင်းပညာရှင်၊ စာနယ်ဇင်းသမားနှင့်စာရေးဆရာ Vivienne Becker က Contemporary Designer Showcase ကိုပြသသည်။
GemGenÃ¨veဂျီနီဗာရှိ Palexpo တွင်မေလ (၁၀-၁၃ ရက်) တွင်ကျင်းပမည့်ရတနာနှင့်ရတနာပြပွဲအသစ်တွင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအတွက်အထူးသီးသန့်အပိုင်းတစ်ခုပါလိမ့်မည်။ ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်နာဟန်ပြ.
A ရွေးချယ်ထားသောရတနာဒီဇိုင်နာများအဖွဲ့၏ပြတင်းပေါက်၊ ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်နာဟန်ပြပြပွဲကိုတည်ထောင်သူသောမတ်စ်ဖားဘာနှင့် Ronny Totah တို့ကပceivedိသန္ဓေယူခဲ့ပြီးရတနာသမိုင်းပညာရှင်၊ Vivienne Becker က.
အဆိုပါခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်နာဟန်ပြ၏မစ်ရှင်ရန်ဖြစ်ပါသည် “ ရတနာလောကကိုရှင်သန်နေသော၊ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေစေသည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်မူရင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ”.
အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောနေရာသည်ဒီဇိုင်းတစ်ခုစီ၏စရိုက်နှင့်ဖန်တီးမှုအမြင်ကိုပြသလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ငယ်ရွယ်ပြီးအသစ် (Emmanuel Tarpin နှင့် Ninotchka Jewels) များသော်လည်းအခြားသူများမှာမူအတွေ့အကြုံပိုရှိသော်လည်းအများပြည်သူအတွက်ကြီးမားသောလူသိများခြင်းမရှိသော (Nadia Morgenthaler နှင့် Alexander Tenzo) တို့ဖြစ်သည်။
စိန့်ပီတာစဘတ်တွင်အခြေစိုက်သောအလက်ဇန်းဒါးတီဇိုသည်ရုရှားပန်းပုထည်သည့်အနုပညာကြောင့်လူသိများသည်၊ သူသည်ခေတ်ဟောင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသူဖြစ်သည်။ Tenzo ရဲ့ရတနာ ကျောက်မျက်များ၊ ကျောက်ခဲများနှင့်သတ္တုများမှစေ့စပ်စွာထွင်းထုထားသော cameos နှင့် intaglios နှင့်အရာဝတ္ထုများပါဝင်သည်။
Alexander Tenzo - ပန်းရောင် Tourmaline လက်စွပ် - ပန်းရောင်လည်ကြိုးများနှင့်စိန်များ။ ရွှေဝါရောင်။
Alexander Tenzo - စတားပတ္တမြား Ring - Demontoids နှင့် Diamonds - ရွှေဝါရောင်နှင့်ငွေရောင်။ Rhodium အနက်ရောင်
Alexander Tenzo - Spessartine နားကပ် - Diamond & Yellow Gold
ဂျူလီယာ Muggenburg အားဖြင့် Belmacz
ဂျာမနီနှင့်လန်ဒန်အခြေစိုက်အနုပညာရှင် Julia Muggenburg သည်လန်ဒန်စိန့်မာတင်အနုပညာကျောင်းတွင်ပညာသင်ခဲ့သည်။ သူမသည်စတင်ခဲ့သည် Belmacz အနုပညာ၊ လူမျိုးစုလက် ၀ တ်ရတနာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုများတွင်ရတနာရင့်ကျက်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
အနုပညာရှင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ “ Belmacz ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို Julia Muggenburg ကပwasိသန္ဓေယူခဲ့ပြီးပြင်သစ်အမျိုးသားအလှပဆုံးနာမဝိသေသနအတွက်အများဆုံးဖြစ်တယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ၂၀ ရာစုမှရတနာ Suzanne Belperron အားဂုဏ်ပြုသောအရာဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် Belmacz ကို Julia Muggenburg မှထီးထီးတစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ Belmacz သည် Mayfair ၏ဗဟိုချက်တွင်ထူးခြားသောအာကာသအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးခေတ်သစ်ဘဝ၏ဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်များမှအကန့်အသတ်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးမျိုးရှိသောအနုပညာကိုဖိတ်ကြားသည်။ ”
Belmacz - Il Mondo - Lapis Lazuli, 18ct Gold - ထူးခြားသောအပိုင်းအစ
Belmacz - နားကပ်
အနုပညာကုန်သည်တစ် ဦး ၏သမီး Sheibani အနုပညာကမ်ဘာပျေါတှငျဗတ္တိဇံကြီးပြင်းလာတယ်။ သူမသည်စင်ကြယ်သောဒီဇိုင်းအဖြစ်ရတနာချဉ်းကပ်။ သူမအတွက်ရတနာဆိုသည်မှာလိုင်း၊ ပုံစံ၊ အရောင်၊
Cora Sheibani - ဇီးကွက်နား၊ အဝါရောင်ရွှေ & Zircons
Cora Sheibani - Paraiba Tourmaline နှင့်အတူရွှေအနီရောင်လက်စွပ်အနီရောင်လက်စွပ်
Cora Sheibani - Triple Aquamarine, Turquoise & Smokey Quartz ဆေးဆေးလည်ဆွဲ
ပေါ်ထွက်လာသောအရည်အချင်းတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသူ Emmanuel Tarpin သည်ဂျီနီဗာရှိအနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းကျောင်း HEAD တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ Tarpin ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်သဘာဝနှင့်ကဗျာမှလာသည်။ သဘာဝသည်ပန်းပုံစံများကိုအဓိကထားသည့်ပန်းပုလက်ရာများကိုအသက်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ထူးခြားသောအရောင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုရရှိရန်သတ္တုများကုသမှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်သူသည်အနက်ဖွင့်သည်။ Emmanuel Tarpin ရဲ့ geranium ပုတီးရွက်, အစိမ်းရောင်အရောင်များဖြစ်သောတိုက်တေနီယမ်နှင့်စိန်များကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် Christie's ၏အံ့ဖွယ်ကျောက်မျက်ရတနာအရောင်းဆိုင်တွင်လေလံတင်ခဲ့သည်။
Emmanuel Tarpin - Hortensia Brooch
Emmanuel Tarpin - နားကပ်
Emmanuel Tarpin - Geranium နားကပ်
Fabio Salini သည်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး High Jewellery သို့အယူအဆရေးရာခေတ်မီမှုကိုယူဆောင်လာသည်။ သူ၏ရတနာ ပစ္စုပ္ပန်သတ်မှတ်ပုံစံများနှင့်ဗိသုကာ volumes ကိုအတူတကွ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခြားနားချက်များနှင့်အတူ "အဖိုးတန်နှိမ့်ချ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ၊ သားရေ၊ အီဘိုနီ၊ ကြေးဝါနှင့်ကြေးနီစသည့်ပစ္စည်းများ”။ Salini ၏မစ်ရှင်သည်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည် “ အဖိုးတန်ရတနာများအတွက်ဘာသာစကားအသစ်”.
Fabio Salini - နားကပ်
ဗြိတိန်ဒီဇိုင်နာပန်းထိမ်သမား ဟန္နမာတင် သူမ၏ဂန္ရတနာ၏ရှုပ်ထွေးသောအနက်ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ သူမ၏ပုံသဏ္unာန်များသည်အလျှော့မပေး၊ အစွမ်းထက်။ linear၊ ပန်းပုနှင့်အလွန်စိတ်ကူးယဉ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သူမသည်ရတနာ၏အခန်းကဏ္ and နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆန့်ကျင်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည့်“ အပိုင်စီးမှု” အရမကြာခဏရတနာနှင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ရတနာ၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့်လွတ်လပ်မှုများအကြားစိတ် ၀ င်စားမှုရှိသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်၏အပြစ်များပိုင်ဆိုင်သောလက်စွပ် Hannah Martin
Hannah Martin တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အပြစ်များပိုင်ဆိုင်သောအဝတ်အစား
ဟန္နမာတင် - မြ Trance တစ် ဦး က Mulet
ဂျီနီဗာမှာသူမ၏ atelier running, Nadia Morgenthaler လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုစတင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ရတနာများသည်သုံးဖက်မြင်ဗိသုကာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများဖြစ်ပြီးရှေးခေတ်မှသဘာဝပုလဲများ၊
Nadia Morgenthaler - Spinel သဘာဝပုလဲနှင့်စိန်များ
Nadia Morgenthaler - သဘာဝပုလဲနှင့်စိန်ပတ္တမြား
Nadia Morgenthaler - Spinel စိန်နှင့်သဘာဝပုလဲ
Eugene Glagolev နှင့် Tima တို့ရေးစပ်ခဲ့သောနောက်ထပ်ရုရှားနှစ်လုံးသည်ရုရှားရတနာများကိုရှေးခေတ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအပိုင်းအစများအဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုရန်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ကိုအပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသည်။ သူတို့တီထွင်ဖန်တီးထားသောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများကြောင့်ကျောက်မျက်ရတနာများကိုရှာဖွေကြသည်။ Demantoid garnets နှင့် regal ဆိုက်ဘေးရီးယား amethysts သူတို့၏ရတနာဖန်တီးမှုများ၏ရှုပ်ထွေးသောဇာတ်ကြောင်းထည့်သွင်း။
Ninotchka ရတနာ - Ring ကို
Ninotchka ရတနာ - Brooch
ကျနော်တို့နှင့်အတူအမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရွှေ့ Sean Gilsonကော်နက်တီကပ်နှင့်နယူးယောက်စီးတီးအကြားရှိအလုပ်ရုံများတွင်လက်ရာများကိုလက်မှုပညာလုပ်သောပန်းထိမ်သမားနှင့်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းချီဆရာရဲ့ဇီဝဗေဒပညာရှင် Gilson ကယူ “ ပုံသဏ္,ာန်၊ ပုံစံနှင့်ပစ္စည်းများကိုအလွန်လတ်ဆတ်သော၊ ဂရပ်ဖစ်ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အထူးသဖြင့်သူသည်ရွှေနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အစွမ်းထက်။ မူလ၊ ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများ၊ ပုလဲများဖြင့်သဘာဝ၊ Akoya၊ တောင်ပင်လယ်နှင့် Baroque ပုလဲများကိုပေါင်းစပ်။ သူတို့၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်တောက်ပမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တည်ဆောက်ပုံ၊ ပြန်လည်ဆွဲဆောင်နိုင်မှု၊ လူငယ်တစ် ဦး zest ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း၊ သန္တာကျောက်တန်းများဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း၊ သဘာဝ၊ အော်ဂဲနစ်ပုံစံများကိုလေ့လာခြင်း၊
Sean Gilson Opal & Blu အနက်ရောင်ပုလဲများကိုစတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိန်ပြာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Sean Gilbert Grey agate, ပုလဲနှင့် angelskin သန္တာ။
Sean Gilson အနီရောင်သန္တာကျောက်၊
အဆိုပါ ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်နာဟန်ပြ GemGenèveတွင်ရတနာအစဉ်အလာ၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုတို့၏အတိတ်ကပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်ကိုမည်သို့အကြောင်းကြားကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
“ ဒီစွန့်စားမှုအသစ်မှာခေတ်မီဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ဟန်ပြတစ်ခုထည့်သွင်းရန်၊ ပေါ်ထွက်လာသောစွမ်းရည်ကိုပြသရန်နှင့်ရှင်းပြဖို့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ် ဘယ်လိုဒီဇိုင်နာမျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပေါ်နေသလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင်ပင်လွတ်လပ်သောဖန်တီးသူအနည်းငယ်သည်ရိုးရာရတနာများ၏သတ်မှတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ ကြီးမားသည့်မူရင်းနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖြင့်မည်သို့ထင်ရှားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြချင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ် ၀ င်စားစရာရတနာများတွင်ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ပုလဲများနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်GemGenèveအားတက်ကြွသောကုန်သွယ်ရေးရာနေရာသာမကပညာရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်စေလိုသည်နှစ်စဉ်လူတွေဟာစွမ်းရည်အသစ်တွေ၊ ပုံပြင်အသစ်တွေနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးတဲ့ရတနာအသစ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလာကြပါတယ်။ ” ~ အိုင်ဒါဖာဘာ
The Contemporary Designer Showcase သည်နယ်နိမိတ်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ရတနာဒီဇိုင်းအပေါ်လုံးဝအသစ်နှင့်အဆင့်မြင့်သောရှုထောင့်များချမှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ CC
Tags:ပုံစံ • ပြပွဲများ • GemGenÃ¨ve
“ မှတ်ချက် ၁ ခုGemGenèveသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ - ရတနာအသစ်များကိုကြိုဆိုသည်"